Ntucha mkpịsị - Atụmatụ Echiche Eke
1. Nnukwu egbu egbu na ụkwụ na-emepụta ihe ndị dị na sunflower na-eweta ezigbo mma
Ụmụ agbọghọ na-ahụ obere tattoo nke nkedo nke sunflower, ụkwụ a egbu egbu na-eme ka ha yie ihe dị mma ma mara mma
2. Nnukwu egbu egbu na mkpịsị aka na-eweta ncheta ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ ihe ncheta
Ọtụtụ ndị mmadụ na-aga maka obere egbu egbu na mkpịsị aka iji chetara ha otu oge pụrụ iche n'oge ndụ ha.
3. Nnukwu egbu egbu na ejiji ink na-eme ka nwanyi na-ele anya
Ụmụ nwanyị na-ahụ n'anya nwa mkpịsị Ink na obere obere egbu egbu na-eme ka ogwe aka mara mma
4. Nnukwu egbu egbu na nkwojiaka ya na ejiji ink na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahụ obere egbugbu na nkwojiaka ya na ejiji ink ojii; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
5. Nnukwu egbu egbu n'apụ aka n'akụkụ ụmụ nwanyị na-eme ka anya ha mara mma
Ụmụ nwanyị ndị na-acha ahụ ọkụ ga-ahụ obere egbu egbu n'úkwù n'akụkụ iji mee ka ha mara mma
6. Nnukwu egbu egbu na mkpịsị aka na-eme ka di na nwunye na-ele anya
Ndị na-eto eto di na nwunye na-ahọrọ nwatakịrị nwanyị na-egbuke egbuke n'aka ha; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
7. Nnukwu egbu egbu n'azụ ntị na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka obere egbuke egbuke mara mma na-acha n'azụ ntị. Ejiji egbu egbu a mara mma.
8. Nnukwu egbu egbu na ụkwụ na-eme ka mmadụ pụta ìhè
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe obere egbugbu e ji ụkwụ ha na-eji ụkwụ dee ya. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
9. Nnukwu mkpịsị aka mkpịsị aka na-eweta ncheta ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ ihe ncheta
Ọtụtụ ndị mmadụ na-aga maka mkpịsị aka obere mkpịsị aka iji chetara ha otu oge pụrụ iche n'oge ndụ ha
10. Nnukwu egbugbu na azụ na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-achọ ka obere egbu egbu na azụ ụkwụ ha. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ọkụ ma dị mma
11. Ogbugbu obere na ejiji pink ink design, tattoo na ụkwụ na-eweta anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ na-achọ inwe obere egbu egbu na-eji ejikere pink ink design, inyocha na ụkwụ. Nke a mere ka ha yie ihe mara mma
12. Nnukwu egbu egbu na ụkwụ na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ obere egbu egbu a na-acha ụkwụ aka na-acha odo odo iji mee ka ha mara mma n'anya ọha na eze
13. Nnukwu egbu egbu na nkwojiaka na-eweta anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ Brown ga-enwe mmasị na-acha odo odo na-acha odo odo ink imepụta obere tattoo na nkwojiaka; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
14. Ogbugbu obere maka Women na-eme ka ha yie ihe nzuzu na klas
Ndị inyom na-aga maka obere egbu egbu na-acha oji oji, nkedo ink na n'akụkụ iji mee ka ha dị ka classy na foxy
15. Nnukwu egbu egbu na -emepụta mkpịsị uhie ink na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị nwere akpụkpọ anụ na-acha aja aja ga-ahụ obere tattoo mara mma na-acha akwụkwọ ndụ ink nwa. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha
16. Nnukwu egbu egbu maka Ndị inyom nwere akpụkpọ anụ na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị Brown na-ahụ obere egbugbu na-eji ejiji pink ink design na onye. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma maa mma
17. Nnukwu egbu egbu na ntị na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ obere egbugbu na ntị na nwa onk imewe okpueze; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
18. Nnukwu egbu egbu na ogwe aka dị ala na-eme ka nwa agbọghọ na-ele anya
Ndị na-eto eto na-ahụ di na nwunye na-ahụ obere egbugbu mara mma na ogwe aka ala; Ejiji egbu egbu a na-acha odo odo na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka ha mara mma
19. Nnukwu egbu egbu na nkwojiaka na-eme ka nwanyị na-elegharị anya
Ụmụ nwanyị Brown na-ahụ obere egbugbu na mkpịsị aka ha na nhazi ifuru; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
20. Nnukwu egbu egbu maka Ndị inyom na-eji mma ifuru; eme ka ha mara mma
Ndị inyom na-ahụ obere egbugbu maka Ndị inyom na-eji nhazi ifuru na ogwe aka ala. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dịkwuo mma
21. Nnukwu egbugbu na azụ na-eme ka nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ obere egbu egbu na azụ azụ na -emepụta ifuru; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
22. Nnukwu egbu egbu na azụ azụ na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka obere egbu egbu mara mma n'azụ azụ ya na nhazi ime ink nke pink. Ejiji egbu egbu a mara mma.
23. Ụmụ agbọghọ na-egbu obere mkpịsị ụkwụ ha iji tụọ ụkwụ ha
Ụmụ agbọghọ na-ahụ obere akara na mkpịsị ụkwụ ha iji mee ka ụkwụ ha mara mma
na-egbu egbuegwu egwuokpueze okpuezen'olu oluegbu egbuakwara obiegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu okpuazụ azụnnụnụegbugbu egbugbuakpị akpịegbu egbu osisi lotusrip tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọudara okooko osisiagbụrụ ebondị na-egbuke egbukeGeometric Tattoosụmụnne mgbuarịlịka arịlịkaima ima mmaegbu egbu hennaenyi kacha mma enyiechiche egbugbuaka akazodiac akara akaraAnkle Tattoosegbu egbu ebighi ebimma tattoosegbu egbu diamondỤdị ekpomkpana-adọ aka mmaNtuba ntughariaka akaegbu egbu egbudi na nwunyeEgwu ugoakara ntụpọegbu egbu mmiriụkwụ akaọnwa tattoosmehndi imeweUche obiaka mma akaenyí egbu egbukoi ika tattoongwusi pusiọdụm ọdụmndị mmụọ ozi